” ဘကြီးကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီနော် “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ” ဘကြီးကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီနော် “
” ဘကြီးကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီနော် “
Posted by ခင်ခ on Sep 24, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 14 comments
” မင်းတို့ရန်ကုန်ကလည်း လမ်းပေါ်မှာကားတွေမောင်းနေကြတာရောဟုတ်ရဲ့လားဟ ”
” ဟာ ဘကြီးကလည်း လမ်းပေါ်မှာ ကားတွေမမြင်ဘူးလားဗျ လမ်းပေါ်ကားတွေမမောင်းလို့ ဘာတွေမောင်း နေလို့လဲ ဘကြီးမျက်မှန် ပါဝါမကောင်းတော့ရင် ဒီနေ့မြို့ထဲရောက်တုန်း အမေရိကန်ဗွီးရှင်း မှာဝင်ပြ လိုက်မလား”
” အမလေးငါ့တူရယ် ရွှေတိဂုံဘုရားဆင်းပြီး မြို့ထဲဆူလေးဘုရား ကသိပ်မဝေးဘူးဆိုပြီး မင်းကားမောင်းလာ တာတောင် မြို့ထဲမရောက်သေးတာ အမေရိကန်ထိ မျက်မှန်သွားလုပ်ရရင်တော့ နောက်နှစ်တောင်တောပြန် ရောက်ပါ့ မလားကွယ် ငါတို့တောမှာ မျက်စိအလကားစမ်းပေးတဲ့ အဖွဲ့လာမှ ပြန်စမ်းလိုက်ရင်ရပါတယ် အခု လည်း မျက်မှန်ကကြည့်ကောင်းပါသေးတယ်ဟ ”
” အမေရိကန်ဗွီးရှင်းဆိုတာ မျက်မှန်ဆိုင်အမည်ပါ မျက်မှန်စမ်းဖို့ အမေရိကန်သွားရမှာဟုတ်ပါဘူးဗျ ဘကြီး ကသာမျက်မှန်ကောင်းပါသေးတယ်ပြောတာ လမ်းပေါ်ကားတွေမောင်းနေတာမြင်သားနဲ့ ကားမောင်းကြတာ ရောဟုတ်လားလို့ ဘာလို့ပြောလဲ ”
” ဟ ငါ့မြေးရ ငါတို့တောက နွားလှည်းစီးရတာတောင် မင်းအခု ရန်ကုန်ကမောင်းနေတဲ့ကားတွေထက်မြန်သေး တယ်နော် မင်းတို့အခုကားတွေဘဲကြည့်လေ ဖြေးဖြေးရှေ့တိုးလိုက် ဟောပြန်ရပ်လိုက် ရပ်လိုက်ရင်လည်း တရေးရလောက်တယ်လေ အဲဒါပြောတာကွ ဒို့တောကနွားလှည်းဆို မြန်လွန်းလို့ ပြုတ်ကျမှဆိုးလို့ ကိုင်တောင်ထားရသေးကွ မင်းဆီလာလည်ရတော့မယ်ဆိုတော့ နွားလှည်းတောင်ပြုတ်ကျမှာဆိုးလို့ ကိုင်စီးရ တော့ ငါကားစီးရင် ခါးပတ်ပတ်ပါပြောကြတယ် တစ်ချောင်းနဲ့တောင်လောက်ပါ့မလားတွေးပြီး ကြောက်စိတ် ဖြစ်သေးတယ် အခုကျတော့ကွာ အတွေးနဲ့ကွာလှပေါ့လေ ရန်ကုန်ကားက ဒို့တောက နွားလှည်းထက် အချိန်ပို ကြာတတ်သကိုး ”
ဘာပြန်ပြောရမှန်းကို မသိတော့ ပြန်မငြင်းတော့ဘဲ ကားဆက်မောင်းခဲ့တယ်ပေါ့၊ ဘကြီးပြောလဲပြောစရာ ဘဲလေ ရွှေတိဂုံနဲ့ ဆူလေး ကို လမ်းမှာ ကားပိတ် မီးပွိုင့်မိနဲ့ တစ်နာရီနီးပါး မောင်းခဲ့ပြီးမှ ဆူးလေးဘုရား တက်ဖို့ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံရှေ့ကားလေးရပ်ခဲ့ပြီး လူကူးမျဉ်းကြားက ဖြတ်ကူးကာ ဆူလေးဘုရားမုဒ်ဦးတစ်ခုထဲဝင်ပြီး လှေကားကနေ ဘကြီးနဲ့နှစ်ယောက်သား ဘုရားပေါ်တက်မယ်လှမ်းအကြွ
” ဘကြီး ဘုရားတက်ဖူးမလို့လား ”
” အေးလေ ဘုရားလာတာ ဘုရားဖူးမလို့ပေါ့ဟ ကလေးမက ဘာလုပ်မလို့လဲ ”
” ဒါဆို သမီးတို့ရဲ့ ဒီပန်းစည်းလေးယူသွားပြီး ဘုရားပန်းအိုးမှာထိုးပေးပါလား ဘကြီး ကူညီပေးပါနော် ”
” အမလေး ကလေးမရယ် ဘုရားခြေရင်းရောက်ကာမှ ဒီလှေကားလေးအတိုင်းတက်ပြီး ဘုရားပန်အိုးမှာ ထိုး ကာ ဘုရားရှစ်ခိုးရတာ ဘာကြာတာမှတ်လို့ကွယ် လူကြုံနဲ့ပေးရတယ်လို့ ကွယ် ကိုယ်တိုင်တက်ကပ်လိုက်ပါ လားဟ ”
” မဟုတ်ဘူး ဘကြီး သမီးတို့ကဘုရားရင်ပြင်ပေါ်တက်လို့မရလို့ပါ ”
” ဟေ ဘုရားရင်ပြင်ပေါ် ဒီက ကလေးမတွေက တက်မရလို့ဆိုတော့ ယတြာများချေကျတာလား ဘုရားပန်းအိုး မှာ တစ်ပါးသူကို ပန်းထိုးခိုင်းပြီး ဘာလုပ်ညာလုပ်အဲလိုမျိုးဆိုလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရောပေါ့ကွယ် ပေး ဘကြီးထိုးပေးခဲ့မယ် ”
” အဲလိုမဟုတ်ပါဘူး သမီးတို့က ဘောင်ဘီတွေ၊ စကတ်တွေနဲ့မို့ ဘုရားရင်ပြင်ပေါ်တက်မရလို့ပါ ”
” ဟေ အံပါရဲ့ကွယ် ဘကြီးတို့တောက ရွာဦးစေတီမှာတော့ ဘုရားဖူးတာဘဲ ဘယ်သူမဆိုဖူးလို့ရပ တစ်ခါ တစ်လေ အရူးမအ၀တ်ဖို့ရိုဖားယား မလုံမလဲတက်ဖူးနေတာတောင်ရှိသေးတယ် တကယ်တော့ ဘုရားရှင်လက် ထက်တော်က ပရာဇာရီအမျိုးသမီးက ဘုရားရှေ့ရောက်တော့ အ၀တ်ဗလာနတ္ထိနဲ့လို့ ဖတ်ဖူးတယ်ဟ ဘုရား ကတော့ ကြည်ညိုလို့ဖူးတာတွေကို ဘာမှပြောခဲ့ဟန်မတူပါဘူးကွယ် ဒါပေမယ့် မင်းတို့မြို့ဘုရားတွေရဲ့ ဂေါ်ပကတွေက ဘုရားကို ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် အလှကြည့် လေ့လာစရာအဖြစ် ထားဟန်တူပါတယ်ကွယ် ”
ဒီလိုနဲ့ မြေး၊အဖိုးနှစ်ယောက် ဆူလေးဘုရားဖူးပြီး ကမ္ဘာအေးလှိုင်ဂူဘက်သွားကြမှာမို့ ကားလေးနဲ့ ဆက်ထွက် လာခဲ့တယ်လေ။
” မင်းတို့ရန်ကုန်လည်း မိုးတော့ အတော်များသားနော် ညကရွာတဲ့မိုးများ သဲလိုက်တာမှအရမ်းပါဘဲ”
” ဒီမနက် မိုးတိတ်သွားလို့ ကံကောင်းတာ ဘကြီးရ အဲဒီမိုးကရွာနေတာ တပတ်လောက်နေ့တိုင်းချနေတာဗျ ”
” ဟေ ဟုတ်လားဟ ”
အဲလိုနဲ့ ကားမောင်းလာရင်း ကုက္ကိုင်းပွိုင့်နားမရောက်ခင်လောက်မှာ ဘကြီးက
” ဒါနဲ့နေပါအုံး မင်းတို့ရန်ကုန်လည်း အတော်တိုးတက်နေပြီဘဲနော် ငါတို့ လူပျိုအရွယ်ရောက်တုန်းကနဲ့ကို မတူတော့ဘူး တိုက်အမြင့်ကြီးတွေနဲ့ လှလို့ပလို့ဟ ”
” ဟုတ်တာပေါ့ဘကြီးရ ”
” အခုဘဲကြည့်လေ ရန်ကုန်မြစ်တောင် ဟိုဘက်ဒီဘက် တံတားသစ်ကြီးထိုးထားတော့ ကားသွားရတာလဲ အဆင်ပြေတာပေါ့ဟ ”
” ဒါနဲ့နေပါအုံး ဘကြီးကမနေ့ကမှ ရန်ကုန်ရောက်တာလေ ကျွန်တော်တောင်အဝေးပြေးဂိတ်လာကြိုတဲ့ဉ္စာ ”
” အေးလေ မင်းလာကြိုတာလေ ဘာဖြစ်လို့လေ ”
” မသိပါဘူး ခုနမြစ်ကူးတံတားပြောတော့ လှိုင်သာယာဘုရင်နောင်တံတား ဘက်ဘယ်တုန်းက ဘကြီးရောက် ခဲ့တာလဲ စဉ်းစားမရလို့ ဒါနဲ့ အရင်ကောကျွန်တော်တို့မသိဘဲ ရန်ကုန်လာဖူးသေးလား ”
” ဟာ ငါ့မြေးရယ် ဘကြီးရန်ကုန်မရောက်တာ ဆယ်စုနှစ်မကရှိရောပေါ့ မနေ့ကမှ ပြန်ရောက်တာကွ မင်း ဘာတွေကြောင်နေတာလဲ ”
” ဒါဆို ခုနပြောတဲ့ မြစ်ကူးတံတားက ဘယ်တုန်းက ရောက်တာလဲဗျ ”
” ဟကောင်ရ မင်းဘဲခုနက ဖြတ်မောင်းလာတာလေ ”
” အဲ ဘကြီး စိတ်တော့မှန်ပါတယ်နော် ”
” ငါစိတ်မှန်လို့ မင်းတို့ရန်ကုန်ကို စိုက်စိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်တာပေါ့ မင်းခုန တံတားတစ်ခုဖြတ်မောင်းခဲ့တယ် မလား အဲဒါဘာတံတားလဲ ”
” အဲဒါ ရွေဂုံတိုင်တံတားလေ ဘာဖြစ်လို့လဲ ”
” အေးလေ အဲဒီတံတားက ရန်ကုန်မြစ်ကိုဖြတ်ဆောက်ထားတာ မဟုတ်ဘူးလား ”
” ဟာ ဘကြီးကလည်း ကြံကြီးစည်ရာ အဲဒါ မြို့ပေါ်ကတံတားပါဗျ ”
” ဟေကောင် မင်းငါ့ကို မအူမလည်ဆိုပြီး ဘတ်တော့မဘတ်နဲ့နော် အဲဒီတံတားက မြစ်ကိုဖြတ်ဆောက်ထားတာ မဟုတ်ဘူး မြို့ပေါ်တံတားဆို တံတားဖြတ်တုန်းက ငါတံတားအောက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ဘာလို့ရေတွေ ဖွေးနေအောင်တွေ့တာလဲ ကဲ မင်းဘာပြောမလဲ ”
” ဘကြီးရယ် ကျွန်တော်သေတာသေလိုက်ချင်တော့တာဘဲ အဲဒါမြစ်မဟုတ်ဘူးဘကြီးရ တစ်ပတ်လုံးမိုးရွာ ထားလို့ လမ်းမပေါ်ရေတွေတင်ပြီး ချောင်းလိုမြစ်လိုဖြစ်နေတာဗျ မိုးရေတွေလမ်းပေါ်လွှမ်းနေတာပါဗျ ”
” ဟေ အဲ ဒါ မိုး ရေ တွေ ဘု ရား ရေ ၊ မသိပါဘူးကွာ တံတားပေါ်ကဖြတ်ရတော့ မြစ်ကမ်းတစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက် ကိုတံတားများထိုးထားတာလားလို့ ထင်တာပေါ့ဟကောင်ရ”
အပျင်းပြေ အပျော် သဘောမျိုးပေါ့ဗျာ။
ဘုရား​ပေါ်​ဘောင်းဘီဝတ်​တက်​ခဲ့လို့ အ​ပြောခံဘူးတယ်​။ ၂၀၁၃ ရန်​ကုန်​ပြန်​တုန်းက.အဲ့​ဒီ​နေ့က မြို့ထဲမှာချိန်းထားတာကိုသွားရင်​ အပြန်​​ရွှေတိဂုံဝင်​ချင်​စိတ်​​ပေါက်​လာလို့သူငယ်​ချင်းနဲ့အတူတူတက်​မယ်​လို့ဆုံးဖြတ်​လိုက်​တယ်​။နက်​ဖြန်​ဆိုပြန်​ရ​တော့မှာ​လေ။ ၀တ်​လာတာကဂျင်း​အရှည်​.ပြီး​တော့အကျပ်​လည်းမဟုတ်​​တော့ရ​လောက်​ပါတယ်​ဆိုပြီးတက်​ခဲ့လိုက်​တယ်​။ အဲ့ဒီမှာ လူယဉ်​​ကျေးတစ်​ချို့ရဲ့​စောင်း​မြောင်း​ပြောချင်းခံရ​တော့တာပဲ။
​ကောင်​​လေးတစ်​ချို့ပါ။ ကိုယ့်​ကိုကြည့်​လိုက်​..နိုင်​ငံခြားသားအဖြူမကိုကြည့်​လိုက်​နဲ့…ကြည့်​စမ်းပါဦးတဲ့…အဖြူမ​တွေက ယဉ်​​ယဉ်​​ကျေး​ကျေးမြန်​မာအ၀တ်​အစားနဲ့ဘုရားလာပြီး မြန်​မာအမျိုးသမီက​တော့ဖြင့်​​ဘောင်​ဘီနဲ့လာတယ်​။မရှက်​ဘူးလားမသိဘူးတဲ့။
ပထမ​တော့မသိချင်​​ယောင်​​ဆောင်​ပြီး​ရှောင်​သွားမလို့။ ဒါ​ပေမဲ့ သူသိ​အောင်​​တော​ပြောရမယ်​ဆိုပြီး​ပြောခဲ့တယ်​။ ကျမ ဒီ​နေ့ မြိုထဲမှာချိန်းတာလာရင်းဘုရား​ပေါ်တက်​လာတာ။ကျအိမ်​ပြန်​ပြီးအ၀တ်​အစားလဲရမယ်​ဆိုဒီ​နေ့ဘုရား​ပေါ်​ရောက်​မှာမဟုတ်​ဘူးလို့။ကျမ​နေတာကမြို့သစ်​မှာပါ။ ကျမ အ၀တ်​အစားဘာမှား​နေလဲလို့။ အဲ့လို​မေးလိုက်​​တော့​ပြေးသွား​ရော။
စာအုပ်တွေကြည့်.. ဘာသာရေးနဲ့.. ရှေ့နောက်ဘ၀နဲ့.. လွတ်ကင်းအောင်ရေးကြတာကို… မရှိတော့…။
ရွှေတိဂုံကဆင်း… ဆူးလှေသွား.. ကမ္ဘာအေးချီတက်..
အပြင်နိုင်ငံခြားသားတွေအမြင်မယ်.. ဗမာတွေအစွန်းရောက်နေတယ်လို့ မြင်တာလည်း…အံ့စရာတော့မဟုတ်..
တစ်နယ်တစ်ကျေးက ဧည့်သည်လာရင် ရောက်တဲ့မြို့မှာရှိတဲ့ ဘုရားဘဲလိုက်ဖူးချင်ကြတာကိုး။ အသက်အရွယ်ကြီး ဘဘကြီးတွေကလည်း သွားချင်ကြတာ ဒါဘဲရှိပေသကိုး သဂျီးရေ။
ကျုပ် အခုနေတဲ့ မန်း လာလည်ကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေဆိုလည်း မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး၊ အလှမ်းမဝေးပေါင် မန္တလေးတောင်တို့ စစ်ကိုင်းကောင်းမှုတော်တို့ ဒါတွေကိုရောက်ချင်ကြတာပ။
ကျုပ်ကတော့ ရောက်တဲ့အရပ် နှိုက်ကလပ်ရှိရင် အဲဒီကို ပိုသွားချင်ချင်ဗျို့။
ဘုရားမသွားရရင်.. နိုက်ကလပ်ဆိုတာကလည်း. ဟိုမှာဖက်အစွန်းပါပဲ..
မြို့တမြို့.. နေရာတနေရာ.. ဒေသတခု.. အသစ်အဦးရောက်ရင်..
အထိမ်းအမှတ်နေရာတွေ.. ၊ ပြတိုက်တွေ.. တိရိစ္ဆာန်ရုံ၊ အပန်းဖြေပန်းခြံ၊ ကမ်းနား၊မြစ်ကမ်း၊ ရှော့ပင်န်စင်တာတွေ.. အဲဒါတွေကို(လည်း) ဦးစားပေးသွားရတာဖြစ်တယ်လို့.. ပြောချင်တာပါ…။
စာရေးဆရာတွေ.. နိုင်ငံတကာအဆက်အသွယ်ရှိသူတွေက.. အဲဒီလိုအတွေး.. အမြင်တွေ.. လည်ပါတ်ချင်စိတ်တွေဖြစ်လာအောင်(သာ).. ရေးသင့်လှတယ်..။
အဲဒီနေရာတွေက.. အတွေးအမြင်သစ်တွေဖြစ်စေတယ်.။ စိတ်လက်အပန်းဖြေ/ပြေစေတယ်..။
တိုင်းပြည်တခုထူထောင်တာမှာ.. ဘာသာရေးလိုက်စားတာတွေများတာနဲ့.. တည်ထောင်၍မရ..။
အရင်အဟောင်းတွေကြောင့်..မအောင်မြင်ခဲ့တာတွေ. လက်ခံမျက်မှောက်ပြုပြီး.. .. တော်လှန်တဲ့စိတ်တွေ.. စိတ်ထဲမိုင်းဆက်မထားကြရင်..
လက်ငါးချောင်းနဲ့.. ၃ခါ.. ၄ခါ.. ၅ခါ.. ဗျို့…
ဒါက.. ဒို့ဘကြီးလုပ်ချလိုက်တဲ့.. နံပါတ်စဉ် ၄..။ :harr:
” စာရေးဆရာတွေ.. နိုင်ငံတကာအဆက်အသွယ်ရှိသူတွေက.. အဲဒီလိုအတွေး.. အမြင်တွေ.. လည်ပါတ်ချင်စိတ်တွေဖြစ်လာအောင်(သာ).. ရေးသင့်လှတယ်..။”
နောင်အလျဉ်းသင့်ရင် ရေးရအောင်လို့။ အဲဒီလိုမျိုးရေးရင် ဓာတ်ပုံပါတွဲမှ ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်နော်။ ကျုပ်က ဓာတ်ပုံရိုက်တာသိပ်မလုပ်ဆိုတော့ ပုံလည်းရှာလိုက်အုံးမှဘဲလေ။
နား နား ပြီး ပြော …။ ကိုယ် ယူတာ ကိုယ် ရ မှာပဲ…။
” ဘကြီးကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီဗျာ…
ဘကြီးမှန်းမသိ အဖွားမှန်းမသိ ဖြစ်သွားတာ တောင်းပန်ပါတယ်… စာအရေးအသားကောင်းတွေ ဖတ်ရတာ အရသာရှိပါတယ်… နိုက်ကလပ်ဆိုလို့ ဟိုနေ့က အရက်ဆိုင်မှာ အရက်သမားတစ်ယောက် ပြောသွားတယ်… (အရက်ကသိပ်ကောင်းတာဘဲတဲ့).. ဟုတ်ပါဘူး… သူ ယိုးဒယားရောက်တုန်းက ရိုးရိုးလေး သွား ယား ကြတာ သူတို့က လိုင်စင်ရဆိုဘဲ.. ဒီလို လိုင်စင်နဲ့ဆိုတော့ အလုပ်သမတွေကိုလည်း ဆေးစစ်တာတို့ မှတ်တမ်းတင်ထားတာတို့ လုပ်နိုင်တော့ အန္တရာယ်ကို ကြိုတင် ကာကွယ်ရရတဲ့အပြင် တော်ယုံကတော့ အနားတောင် မသွားရဲကြဘူးလေ… ဒီထဲဝင်တာနဲ့ သေချာတယ် ဒီကောင် ဒါသွားလုပ်တယ်ပေါ့… ဘာဖြစ်ဖြစ် ဆိုင်တွေတော့ စည်းကမ်းနဲ့ ဆေးစစ်ချက်နဲ့ဆိုတော့ နည်းနည်း သန့်သွားတာပေါ့.. (ကိုယ့်အထင်ပြောပါတယ်.. ကိုယ်ကသွားကမြင်းချင်နေတာကိုး) အဲ့ဒါနဲ့ သွားလည်တဲ့ ဧည်သည်တွေက ရှက်တော့ ဘေးက အအေးဆိုင်လေး ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်လေးတွေ အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုဘဲ အဲ့က ဘေးပေါက်က ဟိုဘက်က လိုင်စင်ရဆိုင်ကို အသာလေးဝင်လို့ရတယ်ဆိုဘဲနော့်…. ဒေါင်းညှောင့်
ကျုပ်က ရူးလို့ရေးတာကို မောင်ရင် မူးပြီး လာဖတ်တယ်ဆိုတော့ အတိုင်အဖောက် ခုမှဘဲညီတော့တယ်နော်
ဒီမှာလည်း ပြည့်တန်ဆာဥပဒေ တစ်ခါကပြဌာန်းမယ် တရားဝင်လိုင်လုပ်ခွင့်ရမယ် ဘာမယ်နဲ့ဖြစ်လိုက်ပါသေးတယ်လို့မှတ်တယ်
ပြည်တန်ဆာတွေကို.. တရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့.. လွှတ်တော်တင်တဲ့သူက…(အမှတ်မမှားရင်).. ၈၈မျိုးဆက်က.. ဒေါ်စန္ဒာမင်းပဲ..။
သူယူအက်စ်လာပြီး.. ဆန်ဖရန်သင်္ကြန်မှာ.. အန်အယ်လ်ဒီအတွက်.. ဒေါ်စုအတွက်မဲဆွယ် စကားပြောသွားသေး..။
အဲဒါကိုတင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်.. အရည်အချင်းရှိတဲ့လွှတ်တော်အမတ်ကို..၀ိုင်းနှိပ်ကွပ်ကြတာကတော့.. (ထုံးစံအတိုင်း) မြန်မာပြည်ရဲ့ကွန်ဆာဗေးတစ်များပါပဲ..
မသိ..မလုပ်ကြတာလည်းမဟုတ်..။ ( စိတ်ပညာသဘောအရဆို..) ပြည့်တန်ဆာတွေရဲ့.. အဲဒီတရားဝင်ဖြစ်မှုနဲ့.. ပွင့်လင်းမြင်သာကို.. အပြင်အထန်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြတဲ့.. အဲဒီ ရှေးစွန်းစွဲဆိုသူများကပိုဆိုး…။
ဘကြီးရဲ့ လုပ်ချစဉ်နံပါတ်.. ၅…
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ယုံ ကြည်မူ့ ကို ဇွတ်ကို ၀င်ပြီး စွက်ဖက်သလိုဘဲ။
ဘုရားကျောင်းကန်လဲ ကိုယ့်ယုံ ကြည့်မူ့အရ သွားကြပါစေ။
လုပ်စရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုလည်း လုပ်အောင် တိုက်တွန်းမယ်ဆိုရင် သဘာဝ ကျ ပြီး မျှ တ တယ်လို့ ထင်မိပါကြောင်း
ဘယ်အရာ မဆို အစွန်းနှစ်ဖက် ကို မရောက်မှ အဆင်ပြေပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကို လာကြ တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေက ပုဂံက ရှေးဟောင်းစေတီတွေကိုမြင်ချင်လို့ လာ ကြတာကိုတော့ မမေ့သင့်။
မြန်မာပြည်ကို ဘယ် နိုင်ငံတကာ ကခေါင်းဆောင်ဘဲ လာလာ ရွှေတိဂုံကိုတော့ လိုက် ပို့ကြတာပါဘဲ.
အဲလို ပို့ပေးလို့ လဲ အပြစ်တင်သူ မရှိခဲ့ပါ။
(သံတမန်သဘောအရ မပြော ချင် လို့ နုတ်ပိတ်နေတယ် လို့  ယူ ဆရင် လဲ ယူ ဆ နိုင်ပါတယ်။
အိုဘားမားလဲ ဘုရား ရောက်တာဘဲ ဟီလာရီ လဲ ရောက်တာဘဲ။
(ဟီလာရီ ကလင်တန်ရဲ့ သက်တော် စောင့် များကတော့ ဘုရားပေါ် တက်ခါ နီး ဘိနပ်ချွတ်ရ တာကို မနှစ်သက်။
လုံခြုံရေး အရ အချိန်ဖင့် လို့ မနှစ်သက်ဆိုတာကိုတော့ စာအုပ်ထဲဖတ်လိုက်ရတယ်)
ရွှေတိဂုံ ဘာ လို့ ပို့ပေးလဲ ဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ပြယုဂ် တစ်ခု ဖြစ်နေလို့ ပို့ပေးတာပါ။
အဲတော့ ဘုရား သွား တာ ဘုရား တရား လုပ် တာ အပြစ်တစ်ခု မဟုတ်။
ဘာသာရေး ကြောင့် နိုင်ငံ မချမ်းသာတာ လဲ မဟုတ်။
မောတာ နောက်မှ ထပ်ပြောမယ်
လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့် လေ။
မဆိုင်ပေမဲ့ သွယ်ဝိုက်ပြီး ဆိုင်မလားလို့။
နိုင်ငံခြား မှာ ကြီး နေတဲ့ ကလေး တွေ ကို မြန်မာစာ သင်ပေးပြီး မြန်မာလို အတင်းပြောခိုင်း တာ အဓိပ္ပါယ် ရှိ/မရှိ။
ရှိ တယ် လို့ လက်ခံသူ ရှိသလို မရှိ လို့ တွေးသူ တွေလဲ အများပါ။
ဒီတော့ စာပေ၊ ဘာသာရေး ဆိုတာက ကိုယ့်အကျိုး အတွက် ကိုယ့် ကိုယ်ပိုင်ဘဝ ကိုယ့်ဟာ ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
အများ ကို မထိခိုက်သ၍ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ထွင်ပြီး ဖောက်နိုင်ပါတယ်။
အများ ကို ထိရင်တော့ အများကို ထိခိုက်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ က စီရင်ပေးနိုင်အောင်သာ အားဖြည့်ပေးရမှာ မဟုတ်လား။
မြန်မာ မှာ ဘုရားကိုက အထိန်းအမှတ် လေ။ ကလေးတွေ ခေါ် နံရံ က ဇာတက ပန်းချီ တွေပြ ပြီး ရှင်းပြယဉ် ကျေးမှုကို ဒါမျိုးနဲ့ လက်ဆင့်ကမ်းတာကိုးခင်ဗျ